UDonna Leon ubeka uBrunetti ukuba abonakalise isihendo sokuxolelwa. | Uncwadi lwangoku
IVenice kunye ne-idiosyncrasy yayo kwisilingo sokuxolelwa.
Me encanta Donna leon kunye noMkomishinala Brunetti. Ungumbhali wam wokubhekisa emva kuka-Agatha Christie omkhulu. Ndiziva ndibonwa ngakumbi nguBrunetti kunoMiss Marple okanye ePoirot. Omkhulu phakathi kwama-greats, u-Donna Leon ufumene ngaphezulu kokungena ezihlangwini zakhe ku-Agatha Christie kwisihloko se- Inenekazi eliKhulu loLwaphulo-mthetho.
Nangona kunjalo, Kwimisebenzi yakhe yamva nje, ushiye eyona njongo iphambili yomsebenzi wakhe ingakhathalelwanga: ulwaphulo-mthetho. Kukho utshintsho olukhulu kugxilwe kunye nomxholo kwiinoveli ezimbini zokugqibela, Ukufa kusekho y Isilingo sokuxolelwa. Ityala kunye nophando bavumela umhlaba wabo ukuba ubonakalise isimilo, ngamanye amaxesha ngeenkqubela phambili kwezopolitiko kunye nokuqaqamba okukhulu, apho ebesele enezinto ezininzi, zeVenice kunye ne-idiosyncrasy yayo.
Amatyala amabini okugqibela kaBrunetti:
En Ukufa kusekho, isingqisho esiqhelekileyo samabali kaBrunetti siyehla xa ethatha iholide kwichweba laseVenetian. Akukho tyala lokuphanda kude kube ngaphaya kwembali yenoveli. Yahlukile kwinto esasiyiqhelile okanye abafundi bayo ababehlala beyilindele, kodwa iyaqhubeka nokutsala. Akubonakali kubi emva kokuba iimeko ezininzi zisonjululwe Brunette, lo thatha incwadi iholide. en Isilingo sokuxolelwaKwelinye icala, ityala elisesekondari, sinokulibeka njengehlwempuzekileyo kwaye akukho sizathu sokuba uBrunetti eseholideyini.
Ku Inoveli yomcuphi Izinto ezintathu ziyafuneka: Umphandi, uphando, kunye nento yokuphanda. Zonke ezinye izinto zinokunceda, kodwa zinokuhanjiswa.
En Isilingo sokuxolelwa Asifumani namnye kodwa babini abaphandi: UMkomishinala uBrunetti kunye neqabane lakhe, uMkomishinala uGriffoni, othatha inqanaba lokuqaqamba eliphantse lafana nelikaBrunetti. Sinento yokuphanda kwasekuqaleni kwinoveli, ukuhanjiswa kweziyobisi kwisikolo sabucala, kodwa uBrunetti uthatha isigqibo sokungaphazamisi. Emva koko umntu ongazi nto uvela emaphethelweni omnye wemijelo, ngesifo esibi. Ukuwa kunokuba ngengozi okanye kubangelwe. Kubonakala ngathi kukho iimeko ezimbini, njengoko kunjalo, kodwa uphando alwenzeki de kube sekupheleni kwebali, liyakhawuleziswa kwaye lisonjululwe ngokuvela komlinganiswa ngomzuzu wokugqibela. Ukusebenza kukaBrunetti akuqondakali kakuhle: kwizahluko zokuqala uchitha ubusuku esibhedlele ehamba nenkosikazi yendoda engekho zingqondweni, ebengayazi. Ubusuku buyadinisa kumkomishinala waseVenice kunye nomfundi, obufumanayo ixesha elide ngokungathi wayejonge le ndoda isi isiqaqa. Ngexesha likaBrunetti esibhedlele, ngobo busuku nakwiintsuku ezilandelayo, kubonakala ngathi umkhomishina ukrokrela ukuba le ndoda ayinakuba ngumyeni wakhe, kodwa ekugqibeleni ukhona kwaye umkhondo wokuqala uphelela ecaleni, ushiya umfundi ezibuza. yintoni efikile kwaye yintoni enomdla kwimbali.
Isilingo sokuxolelwa, ityala lokugqibela likaBrunetti.
Ukubonakaliswa kokuziphatha njengomsonto oqhelekileyo webali:
Isilingo sokuxolelwa yincwadi ethi imema ukubonakalisa imiba enzima yokuziphatha malunga nokuthobela nokunyanzeliswa komthetho ngokungafanelekanga njengoko oku kubonakala ngathi, apho Antigone, umlingiswa ovela kwiintsomi zamaGrike ongamthobeliyo uKing Creon, ubalasele ngakumbi kunoBrunetti ngokwakhe.
Xa ibali liphela umfundi hayi Unemvakalelo yokufunda uphando lwamapolisa, ukuba akunjalo Isikhokelo seVenice, ibali leendaba kunye nentsomi yesiGrike, zonke ngaxeshanye.
Ndiyathemba ukuba, kwibali elilandelayo likaDonna León, uBrunetti uza kuphinda azuze udumo kwisandla somdali wakhe, oza kuhlala engomnye wamanenekazi amakhulu olwaphulo-mthetho, kwaye uya kuzisa ityala elifanele yena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UDonna Leon ubeka uBrunetti ukuba abonakalise isihendo sokuxolelwa.
"Umbongo kaGilgamesh". Umbongo oyindumasi osusela ku-2.500 XNUMX BC. Okwangoku ngoku.